अन्तराष्ट्रिय रियालिटि शो ‘भ्वाइस अफ नेपाल’ डिशहोमको रमाईलो टि.भि मा प्रशारण हुने
Thursday, 31 May, 2018 5:45 PM
१७ जेठ काठमाडौ । नेदरल्याण्डको निकै चर्चित् अन्र्तराष्ट्रिय रियालिटि शो ‘भ्वाइस अफ नेपाल’ डिशहोमको रमाईलो टि.भि मा प्रशारण हुने भएको छ । श्रावणको पहिलो हप्ता देखी प्रशारण हुने यस कार्यक्रमको प्रथम संस्करणमा ३० भागसम्म दर्शकहरुलाई मनोरञ्जन प्रदान गरिने बताइएको छ । यस कार्यक्रम रमाईलो टिभि मार्फत प्रशारण गरिने रे ए.डि रिलिज प्रा.लि. संग डिशहोमले कार्यक्रम प्रायोजनको सम्झौता समेत गरेको छ । सम्झौतापत्रमा बिहीबार एक कार्यक्रमकाबीच डिसहोमका सिइओ सुदीप आचार्य र ए.डि. रिलिजका कार्यकारी निर्देशक दिपकि कोइरालाले हस्ताक्षर गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै डिसहोमका सिइओ सुदिप आचार्यले छोटो समयमै निकै रूचाइएको रमाइलो टि.भि.मा भ्वाइस अफ नेपाल प्रसारण गर्दा यसको लोकप्रियता अझ बढ्ने बताए । यस्तै ए.डि.रिलिजका दिपक कोइरालाले डिसकोमको ग्राहक संख्या ठुला मात्रामा रहेको हुनाले र रमाइलो टेलिभिजनको भ्युअरसीप अरूको तुलनामा धेरै रहेकोले रमाइलो टि.भि.बाट प्रसारण गर्न लागिएको बताए ।
स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित नेपालको एक मात्र डि.टि.एच. सेवा प्रदायक डिशहोमले नेपालमा रहेका ग्राहकहरुमाझ गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । शहरदेखि ग्रामिण भेगमा बस्ने नेपालीलाई आफ्नो रोजाई अनुसारको एच.डी. तथा एस.डी. प्याकेजहरु प्रदान गर्ने यो कम्पनी नेपालको भौगोलिक बनावटमा उपयुक्त रहेको हुनाले जुनसुकै ठाउँमा पनि सहजै जडान गर्न सकिन्छ । हालै सरकारले डिजिटलााईजेशनको नीस्ति लिएको हुँदा डिसहोम जोड्नेको संख्या तिब्र गतिमा बढेको छ । डिसहोमले आफैले पनि आधादर्जन बढि च्यानलहरू प्रवर्धन गरेको छ । जसमा करिब ८ महिनाअघि सञ्चालनमा ल्याइएको रमाइलो टेलिभिजन सर्बाधिक रूचाइएको छ । हिन्दी सिरियल नेपालीमा रूपान्तरण गरेर बजाउने तथा हास्यव्यंग्य कार्यक्रमहरू प्रसारण हुने भएकाले पनि यो च्यानल छोटो समयमा स्थापित भएको बताइन्छ ।